Skule Apk 2022 Download ho an'ny Android [sarimihetsika maimaim-poana]
Aprily 7, 2022 Janoary 19, 2022 by Reyan Ahmad
Miverina miaraka amin'ny fampiharana Android mahafinaritra hafa ho anareo rehetra izahay, izay fantatra amin'ny anarana hoe Skule Apk. Fampiharana Android izy io, izay manolotra fanangonana Sarimihetsika tsara indrindra, andian-tantara amin'ny Internet ary horonan-tsary Shot. Izy io dia manome fialamboly avy amin'ny indostria samihafa, izay matetika ahitana Hollywood sy Bollywood. Ny fialamboly rehetra azo alaina dia maimaim-poana amin'ity sehatra ity ho an'ny mpampiasa.
Misy indostria samihafa, izay manolotra fialamboly tsara indrindra. Misy karazana fialamboly roa matetika, izay tian'ny olona jerena sy ankafiziny. Ny voalohany dia sarimihetsika, izay matetika misy ora vitsivitsy ary mifarana amin'ny toe-javatra mahafaly. Matetika izany no mitranga amin'ny sarimihetsika.
Ny fomba faharoa dia ny andian-tranonkala, izay misy fizarana sy fizaran-taona. Misy andian-tantara marobe isan-taonina hita eny an-tsena, izay azon'ny mpampiasa alefa. Saingy ny olana dia ny atiny premium, izay sarotra idiran'ny mpampiasa maimaimpoana. Noho izany, raha mitady rindranasa ianao, ahafahanao miditra aminy mora foana, dia eo amin'ny toerana mety ianao.
Hizara fampiharana izahay, izay azonao apetraka amin'ny Smartphone Android na Tablet anao. Hahazo ny fanangonana tsara indrindra amin'ny atiny tianao indrindra ianao amin'ny paompy vitsivitsy. Misy fiasa samy hafa misy amin'ity fampiharana ity, izay zarainay amin'ny antsipirihany miaraka aminareo rehetra. Noho izany, mijanona miaraka aminay ary alao ny fahalalana rehetra momba izany.
Topimaso momba ny Skule Apk
Fampiharana fialamboly Android izy io, izay manome ny fanangonana sarimihetsika sy andian-tranonkala tsara indrindra sy farany navoaka. Izy io dia manome ny mpampiasa hidirana amin'ireo fanangonana fialamboly anglisy sy Hindi, izay mitambatra amin'ity sehatra iray ity. Ny votoaty rehetra misy dia maimaim-poana ampiasaina sy alefa.
Ny Skule Movie App dia manome sokajy samihafa, izay manome votoaty tantana tsara. Noho izany, ny mpampiasa dia afaka mahita mora foana ny atiny ankafiziny amin'ity sehatra ity. Noho izany, ny mpampiasa dia mila miditra amin'ny sokajy fotsiny ary ny angon-drakitra mifandraika rehetra dia ho azony.
Ny fizarana voalohany dia momba ny fanangonana sarimihetsika, izay ahafahan'ireo mpampiasa mahita sarimihetsika. Misy tsanganana kely kokoa misy ao aminy, izay ahafahan'ny mpampiasa mampiasa azy ireo mora foana hahitana ny atiny mifandraika amin'ity fizarana ity. Manolotra fizarana misy azy, izay misy Action, Adventure, Romantic, 18+, ary maro hafa.
Ireo mpampiasa dia afaka mampiasa ireo zana-pizarana ireo mba hahitana sarimihetsika mifandraika kokoa. Noho izany, ny fizarana faharoa dia manolotra fanangonana andian-tranonkala. Ny endri-javatra tsara indrindra ao amin'ny fizarana andiany dia ny fizarana amin'ny andiany. Araka ny fantatrao dia tsy maintsy mahita ny fizarana tsirairay amin'ny andiany rehetra amin'ny sehatra samihafa isika.
Fa ny Skule App dia manome ny fanangonana fizarana amin'ny toerana iray, izay midika fa tsy mila mitady ny fizarana manaraka ianao isaky ny mandeha. Afaka miditra fotsiny ianao amin'ny andian-tranonkala tianao indrindra ary ho azonao mora foana ny atiny rehetra.
The Movie App dia manome ihany koa ny haino aman-jery mpilalao, amin'ny alalan'ny mpampiasa dia afaka manana mora kokoa ny fanaraha-maso ny fampisehoana na stream. Ny mpilalao haino aman-jery dia manome fanaraha-maso malefaka, izay ahafahanao manova mora foana ny fampiratiana tsy manelingelina ny stream.
Nozarainay taminareo rehetra ny sasany amin'ireo endri-javatra amin'ity app ity, saingy mbola maro kokoa, azonao jerena ao. Koa alao fotsiny ny Skule ho an'ny Android ary alao ny endri-javatra rehetra misy an'ity fampiharana ity. Raha mila fampiharana sy hacks bebe kokoa ianao dia tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Anaran'ny fonosana all.mediatech.skula
English sy Hindi Entertainment Entertainment
Sarimihetsika maimaim-poana sy andian-tranonkala
Fandefasana malefaka amin'ny fifandraisana Internet ambany
Fialamboly misimisy kokoa ho anao.
Raha te hampidina ity rindranasa ity ianao dia mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny eto amin'ity pejy ity. Izahay dia hizara rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity rindranasa ity. Noho izany, mila manindry ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity.
Skule Apk no fampiharana tsara indrindra ho an'ny mpampiasa mahazo fialamboly maimaimpoana. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary ampidiro ireo fampisehoana mahavariana rehetra misy. Raha mbola misy fanontanianao momba ity fampiharana ity dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Azonao atao koa ny mangataka rakitra Apk.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Movie App, Skule Apk, Skule App, Skule ho an'ny Android, Skule Movie App Post Fikarohana
Ampidino ny Scanner Rio Apk 2022 ho an'ny Android [sarimihetsika maimaim-poana]
Ampidino ny Sugar Live Apk 2022 ho an'ny Android